अर्थव्यवस्था Finanzas को सम्पादकीय टीम | अर्थव्यवस्था वित्त
अर्थव्यवस्था वित्त एक वेबसाइट हो जुन २०० 2006 मा स्पष्ट उद्देश्यको साथ जन्मिएको थियो: प्रकाशित गर्न अर्थशास्त्र र वित्त को दुनिया को बारे मा सत्यवादी, अनुबंधित र गुणस्तर जानकारी। यो उद्देश्य प्राप्त गर्न सम्पादकहरूको टोली हुनु आवश्यक छ जो यस क्षेत्रका विज्ञहरू हुन् र जसलाई सत्यलाई जस्तो बताउन कुनै समस्या छैन। कुनै कालो रुचि वा त्यस्तो केहि छैन।
इकोनॉमीनिया फिनान्जासमा तपाईले धेरै विविध जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ जुन धेरै आधारभूत अवधारणाहरू जस्तो लिएर VAN र IRR के हो? अरू धेरै जटिल व्यक्तिहरूलाई तपाइँका लगानीहरूलाई सफलतापूर्वक विविधीकरण गर्न हाम्रा सल्लाहहरू। यी सबै विषयहरू र अधिकको हाम्रो वेबसाइटमा एक ठाउँ छ, त्यसैले यदि तपाईं हामीले कुरा गर्ने सबै कुरा पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ भने, उत्तम कुरा त्यो हो। यो सेक्सन प्रविष्ट गर्नुहोस् जहाँ तपाईं पूर्ण सूची देख्नुहुनेछ सबै विषयहरू कभर.
हाम्रो टोलीले अर्थशास्त्र मा सयौं लेख प्रकाशित गरेको छ, तर अझ अरू धेरै विषयहरू छन्। हो के तपाइँ हाम्रो वेबसाइटमा सामेल हुन चाहानुहुन्छ? र लेखकहरूको टोलीको भाग बन्नुहोस् तपाइँसँग भर्खर मात्र यो फारम पूरा गर्नुहोस् र हामी सकेसम्म छिटो तपाईं संग सम्पर्क मा हुनेछौं।
अर्थव्यवस्था त्यस्तो चीज हो जुन हामीले पहिलो क्षणबाट चासो लिन्छौं जुन सम्झौताको अन्त्य भयो। जे होस्, यी धेरै जसो ज्ञान हामी सिक्दैनौं, त्यसैले म अरूलाई आर्थिक अवधारणा बुझ्न र बचत सुधार गर्न वा प्राप्त गर्न सुझावहरू वा विचारहरू दिन मद्दत गर्न चाहन्छु।
म बजारमा वर्षौं देखि लगानी गर्दैछु, वास्तवमा एक कारण वा अर्को कारणले लगानीको संसारले मलाई चासो देखायो किनभने म उच्च माध्यमिकमा थिएँ। यो सबै पक्ष मैले सँधै अनुभव, अध्ययन, र घटनाहरूमा लगातार अपडेट अन्तर्गत पालनपोषण गरेको छु। मसँग अर्थशास्त्रको बारेमा कुरा गर्ने भन्दा बढी उत्साहित भएको केहि छैन।
म जानकारी को लागी उत्साहित छु, र विशेष गरी अर्थव्यवस्था को बारे मा र मेरो जानकारी मानिसहरुमा स्थानान्तरण गर्दै ताकि तिनीहरूले आफ्नो पैसाको प्रबन्ध गर्न सक्दछन्। अवश्य पनि, वस्तुस्थिति र स्वतन्त्रताको साथ, यो अधिक हराइरहेको हुनेछ।
जोस मनुएल वर्गास प्लेसहोल्डर छवि
म अर्थशास्त्र र वित्तको बारेमा उत्साहित छु, यसैले मैले यस प्रोजेक्टमा शुरू गरेको छु जहाँबाट म सिक्न जारी राख्ने आशा गर्दछु, र मेरो ज्ञान साझा गर्दैछु, यस संसारमा भइरहेको सबै चीजहरूको साथ अप-टु-डेट भइरहेको छ।
म अर्थशास्त्र र वित्त को अध्ययन को बारे मा उत्साहित छु, यति धेरै कि मेरो अध्ययन यी क्षेत्रहरु सम्बन्धित हुन समाप्त भयो। मेरो महत्वाकांक्षा भनेको संसाधनहरूको अधिक समान वितरणमा योगदान पुर्‍याउनु हो जुन सामाजिक विज्ञानको रूपमा अर्थशास्त्रको उद्देश्य हुनुपर्दछ।
मेरो नाम जुलियो मोराल हो र मँ म्याड्रिडको कम्पुलेटन्स युनिभर्सिटीबाट इकोनोमिक्समा डिग्री पाएको छु। मेरो ठूलो उत्कटता अर्थशास्त्र / वित्त र हो निश्चय पनि लगानीको रोमाञ्चक संसार हो। केहि वर्षको लागि अब म इन्टरनेट मा ट्रेडिंग बाट पैसा कमाउन को सक्षम हुनु को ठूलो भाग्य छ।